Mareykanka wuxuu xasuustaa dhibbanayaashii 9/11 20 sano kadib weeraradii argagixiso
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Mareykanka wuxuu xasuustaa dhibbanayaashii 9/11 20 sano kadib weeraradii argagixiso
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Crime • Wararka Dowladda • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Xusuus -qoryadu waxay noqdeen caado sanadle ah, laakiin Sabtida waxay qaadataa ahmiyad gaar ah, waxay imaanaysaa 20 sano subaxdii ka dib oo dad badani u arkaan inay tahay bedelka taariikhda Mareykanka. Xusuusin xanuun badan oo ku saabsan isbeddeladaas, toddobaadyo uun ka hor ayay ciidamada Mareykanka iyo xulafadooda dhammeystireen ka bixitaankii fowdada ahaa ee Mareykanku ka bilaabay Afqaanistaan ​​wax yar ka dib weeraradii aargoosiga - oo noqday dagaalkii ugu dheeraa taariikhda Mareykanka.
Sebtember 11 -keedii ayaa lagu sharfay sannad -guuradii 20 -aad ee weerarrada.
Madaxweyne Biden wuxuu ku baaqayaa midnimo sanad -guurada 20aad ee 9/11.
Xusuus -qoryo lagu qabtay Magaalada New York iyo daafaha dalka.
Sanad -guuradii 20 -aad ee ka soo wareegtay weerarradii argagixiso ee lagu qaaday Xarunta Ganacsiga Adduunka iyo Pentagon -ka, dadka Mareykanka ayaa isugu yimid si ay u xusuustaan ​​una maamuusaan ku -dhawaad ​​2,977 dhibbaneyaal oo naftooda ku waayey September 11, 2001.
Munaasabadda maanta oo ah mid xasaasi ah oo ka dhacday Xuska 11 -ka Sebtember ee New York City waxay ku bilaabatay daqiiqad aamusnaan ah 8:46 am (12:46 GMT), waqtiga saxda ah ee ugu horreysa ee laba diyaaradood oo rakaab ah oo la afduubay ayaa ku dhacay Xarunta Ganacsiga Adduunka ee Magaalada New York.
Ehelada dhibanayaasha ayaa markaa bilaabay inay kor u akhriyaan magacyada 2,977 qof oo ku dhintay weerarada, waana caado sanadle ah oo qaadata afar saacadood.
“Waan ku jecelnahay waana ku xiiseen,” qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa yiri iyadoo muusig qoob -ka -ciyaarka ah lagu garaacay xafladda rasmiga ah, oo ay ka soo qeybgaleen marti sharaf ay ka mid yihiin Madaxweyne Joe Biden iyo Madaxweynayaashii hore ee Barack Obama iyo Bill Clinton.
Ground Zero ee Magaalada New York, 2,753 qof, oo ka kala yimid adduunka oo dhan, ayaa lagu dilay qaraxyadii hore, waxay ku boodeen dhimashadoodii, ama si fudud ayay ugu lumeen dabkii munaaradaha burburayay.
At Pentagon, diyaarad duleel ah ayaa jeexjeexay dalool ku yaallay xarunta neerfayaasha milateriga ee awoodda weyn, waxaana ku dhintay 184 qof oo diyaaradda iyo dhulka ku jiray.
Shanksville, Pennsylvania, mawjaddii saddexaad ee afduubayaasha ayaa ku dhacay beer ka dib markii rakaabku ay dagaallameen, iyagoo United u diray 93 ka hor inta aysan gaarin bartilmaameedkii la rabay - laga yaabee dhismaha Capitol -ka Mareykanka ee Washington.
Xusuus -qoryadu waxay noqdeen caado sanadle ah, laakiin Sabtida waxay qaadataa ahmiyad gaar ah, waxay imaanaysaa 20 sano ka dib subaxdii oo dad badani u arkaan inay wax ka beddeleen taariikhda Mareykanka.
Xusuusin xanuun badan oo ku saabsan isbeddeladaas, toddobaadyo uun ka hor ayay ciidamada Mareykanka iyo xulafadooda dhammeystireen ka bixitaankii fowdada ahaa ee Mareykanku ka bilaabay Afqaanistaan ​​wax yar ka dib weeraradii aargoosiga - oo noqday dagaalkii ugu dheeraa taariikhda Mareykanka.
Xusuus -qoryada maanta ayaa imanaya iyadoo khilaaf qaran uu hadheeyo dareen kasta oo xidhitaan iyada oo laga cadhaysan yahay daad -gureynta Kabul, oo ay ku jiraan 13 askari oo Mareykan ah oo uu ku dhintay qof isqarxiyay.